Nchịkwa sistemụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Njikwa usoro
Nna-ukwu Nzuzo Steam anaghị arụ ọrụ.
Nna-ukwu Nzuzo Steam anaghị arụ ọrụ. Gee ntị, ma ọ bụrụ na ahịa ahụ emechi, enwere m ike ree kaadị? CHOOSING nyere aka ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na nna ukwu Idke na - ama jijiji na Okwu ma kpochapụ 2010 Word ...
Gini mere enweghi ntinye onu na google chrome?
Gini mere enweghi ntinye onu na google chrome? Gbalịa ka ihichapụ ihe nchọgharị ahụ (na Ntọala) Gbanwee ihe nchọgharị)) Nke a bụ vidiyo https://www.youtube.com/watch?v=LiCHXKMpoIk Chrome-shit, tinye cornball. achọghị. Egwu Ebere obere ihe, ọtụtụ ihe kpatara ya ...
Biko nye m ndepụta nke iwu maka faịlụ ogbe ahụ. bat.
Gbanyụọ ndepụta nke iwu maka faịlụ ahụ. bat. CMD (cmd) iwu ntụgharị okwu strok.COPY -Start-elu nke otu ma ọ bụ karịa faylov.DATE-Nịm ugbu daty.CHKDSK-elele na diski na ọgwụgwụ statistiki.CLS-ihicha ekranaSHKNTFS-ngosi na-agbanwe iṅomi oge diskavo zagruzki.ATTRIB nkewa ...
ọ nwere ike ịwụnye Windows10 ekwentị na mbadamba gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ?
ọ nwere ike ịwụnye Windows10 ekwentị na mbadamba gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ? Ọ ga-ekwe omume. Mgbe Windows10 na-emepụta ekwentị na ndị na-emepụta mbadamba nkume ga-edepụta ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa, ya bụ na ha ga-ahazi usoro maka ngwa.
Esi gbanyụọ usoro nhazi usoro msconfig na Windows 7 SP1?
Olee otu iji gbanyụọ usoro sistemụ msconfig na Windows 7 SP1? Ekwuputala Kzhtsya ebe a, yuzay - windowsfix. Ru na ị nweghị ike inye ndụmọdụ ebe a n'oge na-adịbeghị anya: Kwupu, kọmputa agaghịkwa akpọgharị. na ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,290.